Xafiiltanka Doorashooyinka ee dhamaan doontaa kama firxin doonto Cadowga Somaliland | Somaliland.Org
Xafiiltanka Doorashooyinka ee dhamaan doontaa kama firxin doonto Cadowga Somaliland
December 9, 2012	Somaliland marnaba noqon mayso mid dib u noqota sida ay maalmahan saadaalinayaan kuwa cadowga ku ah ee ka xun horumarkeeda, xifaaltankan yarina noqon maayo mid lagu kala guranaayo ee wuxuu noqonayaa mid sii adkeyn doona qaranimada dalkan iyo dawladnimadiisa, waana sidii EEBE looga bartay, kana rajaynayno haddii uu idmo.
Rayalcaamka dadweynaha reer Somaliland eek u nool cardigan Ingiriiska ayaa maalmihii ugu danbeeyay si weyn uga doodaayay sida uu yahay xaalka Somaliland, iyadoo arrinta ugu weyn ee ay wadnaha farta uga hayaan ay tahay sida ay ka maqlayaan dadka aan Somaliland u dhalan ee ka xun Madaxbanaanida JSL, kuwaasi oo mar walba sii saadaaliya in marxalad kasta oo Somaliland ku soo food yeelata ay noqon doonto tii ay reer Somaliland ku kala guuri lahaayeen,balse aanu sidaasi marnaba ALLE ka dhigin.
Waxa faaqidayaasha mawduucan si kasta oo ay ugu kala duwan yihiin afkaarta iyo taageerada ay ururada um kala hayaan ay haddana ka midoobaan marka ay isla qiraan in cadawga Somaliland uu yahay mid sugaaya in maruun ayshacabka reer Somaliland qoryaha isku gurtaan dibna u soo qaadaan raadkii arooryaad.
Inkastoo ay dadku ku kala aragti duwan yihiin qadiyada iyo xalkeeda haddana waxa jira in qof kastaa uu hadalkiisa ku soo afjaraayo in guusha ugu weyni ay tahay in aan la waxyeelin sumcada uu lee yahay sawirka guud ee qarankani oo ah nabadgelyo iyo dimoqraadiyad ku dhisan tartan xalaal ah,taasi oo ah waxa keliya ee u raasamaalka ah dadkan iyo dalkan dulman ee aan weli helin hadafka keliya ee ay geediga u yihiin oo ah in mujtamaca aduunka kaga mid noqdaan.
Faaqidayaashu waxa ay ay qaarkood ka codsanayaan bulshada reer Somaliland in aan mar danbe sare loo qaadin gacan dhibco uskag ah u yeeli karta ummadnimadeena, isla markaasina aanay u marqaati furin kuwa shisheeye eek u doodaaya in reer Somaliland aanay wadi Karin dawladnimo u gaar ah oo ay maraan dheerayn u soo kala dheerayn doonaan ka mid noqoshada waxa ay u yaqaanaan Soomaaliweyn.
Dhab ahaantii waxa hubaal ah in damiir kasta oo wanaagsani aanu marna aqbali doonin in la dhibaateeyo bulshada reer Somaliland ee halganka dheer u soo gashay adkaynta qaranikadooda haddii ay tahay naf iyo maalba, waxana maanta qof kasta oo reer Somaliland u ah guul qaranka oo guuleysta ee uma ah guul qof, urur ama qabiil guuleysta, taasian waxa ay kaga soo gudbeen tijaabooyin hore, maalinta ay cadowgu is yidhaahdaan maanta ayay u daran tahayna waa maalinta uu sii adkaysto qarankani xididada.
Si kastaba xaalku ha ahaadee waxa xukuumaddana looga fadhiyaa in ay xoojiso amniga oonay ka ogolaan ardaa iyo urur toona in la waxyeelo sharafta dalkan, waana in la ogaadaa in ay Somaliland horey dhinac uga wada martay ardaa xoog weynaa oo la cadhooday siyaasigoodii,taasi oo ah mid dhito u ah qarankan iyo qoys kasta oo ka hor yimaada, guushana waa ta qaranku wada gaadho ee maaha mid cid u gaar ah.
Mustafe Cabdi Ciise”Shiine”
Previous PostShir ku saabsan Adkaynta Nabad-gelyadda oo u furmay xubno ka kala socday Somaliland iyo SoomaaliyaNext PostSalaadiin Difaacay Hanaankii doorashadu uga qabsoontay gobolka Awdal	Blog